LG's V10 ဟာဘက်ထရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းတာတာမရှိပါဘူး Androidsis
Manuel Ramirez | | ဘက်ထရီ, LG, NOTICIAS
ယမန်နေ့ကသုံးစွဲသူများအသုံးပြုသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ Facebook အက်ပလီကေးရှင်းသည်ဖုန်းနှင့်ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည့်တရားခံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်မလိုကိုစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။ ဖြေရှင်းနည်းအချို့ရှိပါတယ် Chrome browser ကိုအသုံးပြုခြင်းမိုဘိုင်းဗားရှင်းတွင်ဤလူမှုကွန်ယက်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန်အားကျဖွယ်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူတစ် ဦး ကြုံတွေ့ရသောနောက်ပြproblemနာတစ်ခုမှာနည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများကြောင့်ရှာဖွေမတွေ့နိုင်သည့် terminal တစ်ခုဖြစ်သည် သင့်လျော်သောစားသုံးမှုများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောချိန်ခွင်လျှာ သင်၌ရှိသည့်ဘက်ထရီ၏။
သူတို့အားစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တစ်ခုဖြစ်သည် မကြာသေးမီက LG V10 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောအချို့သောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူအံ့အားသင့်သော terminal ကို ထိပ်မှာတည်ရှိပြီးကြောင်းအလယ်တန်း panel ကို အဓိကမျက်နှာပြင်နှင့်၎င်းတွင်ရှေ့ကင်မရာတစ်ခုသာမကနှစ်ခုရှိသည်။ Snapdragon 5,7 ချစ်ပ်ပါ ၀ င်သည့် Quad HD မျက်နှာပြင်ပါသည့် ၅.၇ လက်မဖုန်းတွင်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူကအလွန်ကောင်းမွန်သည့်အလောင်းအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကိုဤစမတ်ဖုန်းတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အသက်ပေးသည်။ ၎င်းတွင်ကြီးမားသောတစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာဘက်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖုန်းမျက်နှာပြင်ကြီးကြီးရှိသောအဆိုးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က Xperia Z3 compact နဲ့အခြားစမတ်ဖုန်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်၊ ၎င်းသည်သူရရှိသောအရာများနှင့်များစွာကွာခြားသည် ဒီအရမ်းဖုန်းပေါ်မှာ။ Phone Arena မှစမ်းသပ်မှုများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအသုံးပြုသူများစွာကဒီဖုန်းကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သောဒီဖုန်းကိုဘာမှတ်ချက်ပေးနေသလဲဆိုတာကိုအတည်ပြုပေးသည်။
၅.၇ လက်မအရွယ် QuadHD မျက်နှာပြင်နှင့် အသိပေးချက်များအတွက်အလယ်တန်း panel ကို 3.000 mAh ဘက်ထရီမှ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တောင်းဆိုသောစမတ်ဖုန်းသို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော resolution၊ အရွယ်အစားမျက်နှာပြင်နှင့်အလယ်တန်းတစ်ခုတို့သည် V10 ကိုမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမပြုမူကြောင်းတွေ့ရှိရသောစမ်းသပ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အား ဦး တည်စေသည်။
သုံးစွဲသူများမည်မျှပိုများသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြီးသားဖြစ်သည် သူတို့ကတစ်နေ့တာကိုအလုံအလောက်ထက်ပိုပြီးသုံးနိုင်တဲ့ terminal တစ်ခုပိုလိုချင်ကြတယ်အကောင်းဆုံး chip, အကြီးဆုံး RAM သို့မဟုတ် 4K resolution ရှိသော screen ရှိခြင်းထက်။ Samsung ၏ကိုယ်ပိုင် Galaxy S6 သည်အစွန်းရောက်အသိပေးချက် panel နှင့် QuadHD resolution အတွက်အပိုပါဝါကိုသုံးရန်အတွက်ဘက်ထရီပြproblemနာရှိနေသည်။
ထွက်စမ်းသပ်မှုများတွင်၎င်းကို V10 ၏ဘက်ထရီထဲသို့ထည့်သည် အကြီးဆုံးဖုန်းများကြားတွင်အဆိုးဆုံးအဖြစ် မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ။ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်တူညီသောအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီရန်ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာရန်ပုံမှန်ဘတ်ထရီသက်တမ်းကိုတုပသည့်ထုံးစံ script ကိုလွန်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ခံရသည့်အမျိုးမျိုးသောစမတ်ဖုန်းများတွင် ၂၀၀ nits အဆင့်ကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ ဘက်ထရီနောက်ဆုံးတွင်သေသည့်အထိ Terminal မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ script သည်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နေကြောင်းစစ်ဆေးမှုတွင်။
LG V10 မှာအနည်းငယ်ရတယ် ၅ နာရီနှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်း ၅၁ မိနစ်Samsung Galaxy Note5သို့မဟုတ် Apple's iPhone 6S Plus ကဲ့သို့သောအခြားဖုန်းများထက်များစွာနိမ့်ကျသည်။ ၎င်းနှစ်ခုသည် ၉ နာရီနှင့် ၁၁ မိနစ်စီရှိကြသည်။ ၎င်းသည် LG ဖုန်းအသစ်ထက် ၃ နာရီခွဲပိုကြာသည်။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများ၏ထူးခြားသောအချက်အလက်များအနက်တစ်ခုမှာ LG V10 ဖြစ်သည် အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းအတွက်အလွန်ကောင်းသောရလဒ်များကိုပေး၏ ၎င်းကိုပြီးစီးရန် ၆၅ မိနစ်၊ Note 65 သည် ၈၁ မိနစ်၊ Apple က ၁၆၅ မိနစ်အထိကြာသည်။ LG ကဒီ phablet ကိုစမ်းသပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းအဆိုးဆုံးအချိန်ကိုရရှိခဲ့တာကြောင့်ပြtheနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပေမယ့်အန္တရာယ်မရှိပါဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG V10 ၏ဘက်ထရီသက်တမ်းမှာ Phablets ဟုခေါ်သည့်ဖုန်းများထဲတွင်အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့ ???? သူမသိခဲ့ဘူး
Jose Chan ကိုပြန်သွားပါ
မျက်နှာပြင် ၅ နာရီ ??
Angel Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
Test script ကိုအချိန်မရွေးအသုံးပြုနေစဉ်ဖုန်းပိတ်ထားသည်အထိ ၅ နာရီ။
Sergio Guerrero Lopez နေရာယူပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
Sergio Guerrero Lopez ကိုပြန်ပြောပါ
မျက်နှာပြင် ၅ နာရီ ?? ဒါကအချိန်တော်တော်များများပါပဲ၊ နေ့ကိုဘယ်သူမှမပြောဘဲနေရင်နေ့အချိန်မှာဘယ်သူမှဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို ၅ နာရီပိတ်ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ သင်ကသူနဲ့အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နေတာဒါမှမဟုတ်ပျင်းရိတဲ့ xD မဟုတ်ရင် ၃ နာရီပေးတဲ့ဖုန်းကကောင်းနေပြီးထူးခြားချက် ၄ ခု (မှလွဲ၍) ငါပြောခဲ့သလိုပဲဆိုးတယ်
Gonzalo CN ဟုသူကပြောသည်
ဘက်ထရီ၏ကြာချိန်သည်အခြားဆိပ်ကမ်းများနှင့်များစွာကွာခြားမှုကြောင့်သယ်ဆောင်ရသည့်မြန်ဆန်သည့်အားသွင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲမှတ်စုခေါင်းစဉ်တွင်ပေါ်လွင်နေသည်ကိုမည်မျှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသနည်း။ သွားသွား !!!
Gonzalo CN အားစာပြန်ပါ
ဘက်ထရီသည်ကြာရှည်ခံသည်မှာမှန်သော်လည်းလျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်း၏အားသာချက်များနှင့် (အနည်းဆုံးမက္ကဆီကိုတွင်) ၎င်းသည်လဲလှယ်ရန်အပိုဘက်ထရီနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။
သံသယမရှိဘဲအဆိုးဆုံးဘက်ထရီ။ ငါ LGv10 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ကြောင်းစဉ်းစားပါ။ မက္ကဆီကိုတွင်သူတို့သည်လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်သင့်အားဘက်ထရီကိုလက်ဆောင်ပေးကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် LG ကနေ့၏အလယ်တွင် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်ဟုယူမှတ်သည်။ ဘယ်သူမှမကျေနပ်ပေမယ့်ဖုန်းကိုမြန်မြန်အားသွင်းနေပြီး ၅ မိနစ်ထက်ပိုပြီးဖုန်းခေါ်ခိုင်းတဲ့အခါသူကသင်၏နားကိုဆန့်ရန်အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အထိအပူရှိန်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဘက်ထရီကိုကြာရှည်စွာမပူစေလိုပါကအောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ ဒုတိယဖန်သားပြင်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ၊ ဝိုင်ဖိုင်မသုံးပါနှင့်၊ Facebook အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးမပြုပါနှင့်၊ ထို့နောက်သင့်တွင်ဆဲလ်ဖုန်းရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ခြောက်နာရီရောက်မည်ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ Android အတွက်Pokémon Shuffle ကိုအခမဲ့စပိန်ဘာသာဖြင့် Play Store မှအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်